Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina TYS165-3 Shehwa
I-TYS165-3 bulldozer yi-dozer yohlobo lwethrekhi yohlobo lwamahhashi eyi-165 ene-hydraulic drive eqondile, ukusebenza okuqinile okulengisiwe nokusiza ama-hydraulic, umshayeli we-pilot hydraulic blade control kanye ne-single level steering and braking control. I-TYS165-3 ngogandaganda ibonakala ngokusebenza okuphezulu, okuvulekile ...
I-TYS165-3 bulldozer yi-dozer yohlobo lwethrekhi yohlobo lwamahhashi eyi-165 ene-hydraulic drive eqondile, ukusebenza okuqinile okulengisiwe nokusiza ama-hydraulic, umshayeli we-pilot hydraulic blade control kanye ne-single level steering and braking control.
I-TYS165-3 ngogandaganda ibonakala ngokusebenza okuphezulu, okuvulekile, isakhiwo esilungiselelwe, ukusebenza okulula kanye nensizakalo enezindleko eziphansi futhi enokwethenjelwa yonke ikhwalithi. Kungumkhiqizo wokuthuthuka ngesisekelo se-TYS165-2 bulldozer.
Isisindo sokusebenza (kufaka phakathi i-ripper) (Kg): 18300
Ukucindezela komhlaba (kufaka phakathi i-ripper) (KPa): 28.2
Ubuncane. imvume yomhlaba (mm): 375
Ubukhulu bebonke (mm): 558542223190
Ububanzi besicathulo (mm): 1000
Okukhipha uhleloL / min: 190
Langaphambilini I-TS160-3 Bulldozer